Na-agbakwụnye uru bara uru na mbipụta - Intec Printing Solutions Ltd
Bụrụ onye mmekọ Intec
Atumatu & nkwupụta
Ịcha & creasing
Mwepu, lamination & holographics
Ndị na-ebi akwụkwọ agba dijitalụ
Chọọ ngwaahịa site na ụdị
Ọkwọ ụgbọala & nbudata
Akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ ColorSplash asụsụ mba ụwa
Usoro ọrụ & njikwa agba
Ngwọta akara LPS215
Ngwaahịa nke ketara
Deba aha ngwaahịa ọhụrụ
Nkwado vidiyo 'Otu esi eme'
Akwụkwọ ikike & nloghachi
MSDS – ahụike na nchekwa
Mgbasa ozi akwadoro na enwetara ikike
Nwepụta ụlọ ọrụ
UK isi ụlọ ọrụ
Sistemụ igbutu dijitalụ
Ụdị dịgasị iche iche iji kwado ngwa na mmepụta ihe
Sistemụ mkpochapụ & laminating
Tinye mmetụta adịchaghị mma na foil toner, laminates na ihe nkiri holographic
Usoro mbipụta agba dijitalụ
Modul, ndị na-ebi akwụkwọ nka eserese dị elu
Ndị na-ebi akwụkwọ dijitalụ
Intec anọwo n'obi nke ihe ọhụrụ na imewe nke Britain maka ụlọ ọrụ mbipụta na mmecha zuru ụwa ọnụ kemgbe 1989 wee ghọọ onye na-eweta ihe ngwọta pụrụ iche maka ndị na-ebi akwụkwọ dijitalụ, ndị na-emepụta ihe na ngwaọrụ ịkpụ.
Ndị na-egbu ihe dijitalụ
Nhọrọ nke ịcha anwụ dijitalụ na nsusu ọnụ maka ngwa dị iche iche site na nkwakọba ruo na akara. Ebe a na-ehicha akwa na sistemu nri akpaaka, igwe na-egbutu kaadị azụmaahịa na sistemu ịcha akara mpempe akwụkwọ raara onwe ya nye nri nsusu ọnụ.
Desktọpụ na ngwaọrụ ndị ọkachamara na-akwụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ, nke emebere iji nye ihe ngwọta dị ọnụ ala na nke a na-achọ maka ime ụlọ maka ịgbakwunye foil ọla, laminates na mmetụta holographic.
Ngwa ngwa tinye adịchaghị emecha yana mmetụta dị egwu na mpempe akwụkwọ ebipụtara.
Ndị na-ebi akwụkwọ dijitalụ na-edu klaasị na ọnụ ala, na-akwado ụdị mgbasa ozi dị ukwuu. Usoro ahụ gụnyere, nhọrọ nke ụdị agba agba 4 maka mkpụmkpụ & ọkara nke mbipụta kaadị, nkwakọ ngwaahịa, ọkọlọtọ, akara, envelopu, mgbasa ozi na-ebufe na ọtụtụ ndị ọzọ.
Lelee ụdị ngwaahịa Intec dị ugbu a.
Lelee na budata broshuọ ngwaahịa.
Lelee vidiyo ngwaahịa.
Gị UGBU A
Ejila okwu anyị naanị maka ya - nke a bụ ihe ndị ahịa anyị na-ekwu - pịa maka ọmụmụ ihe.
Anyị Intec ColorFlare na-azọpụta anyị ego ma na-eweta azụmahịa ọhụrụ na-akpali akpali maka ụlọ ọrụ ebipụta azụmahịa anyị tọrọla ogologo oge.
Tony Bowyer Bipute
Anyị ColorCut flatbed cutter nyeere aka gbanwee azụmahịa anyị site na ịbawanye arụpụta ọrụ & ịmepụta ohere ọhụrụ.
Kaadị egwu egwu nketa
Anyị nwere ike ịmepụta otu prototype ma ọ bụ ọbụna otu ụdị ihe atụ, ngwa ngwa na achọrọ - na ntụkwasị obi na ịdịmma nke ọrụ ahụ.
Ụlọ ihe nkiri Whitebox
Ị chọrọ nkwado anya site na Intec?
Nweta enyemaka ozugbo site n'aka ọkachamara teknụzụ Intec - anyị ga-ekekọrịta ihuenyo gị site na TeamViewer wee dozie nsogbu ọ bụla ị nwere ike izute na akụrụngwa Intec gị. Kpọọ Intec buru ụzọ nweta bọọlụ.
Nweta enyemaka site na TeamViewer
Intec UK isi ụlọ ọrụ:
Intec bụ ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ n'ezie, nwere ụlọ ọrụ na UK na USA, na-akwado netwọk nke ndị na-ere ere n'ofe ụwa. N'ịbụ nke tọrọ ntọala ihe karịrị afọ 30 gara aga, Intec bụ onye a na-akwanyere ùgwù nke ukwuu maka ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya, ọkachamara, ọkachamara nke ezubere naanị maka ụlọ ọrụ mbipụta & eserese. Gụkwuo ebe a. Gụọ ka Intec si 'na-eme mgbanwe' site na ya ọrụ ebere.
Atumatu na Nkwupụta
Nkọwa ndebanye aha ụlọ ọrụ
Kpọtụrụ Intec UK
Kpọtụrụ Intec USA
Nweta Akwụkwọ Akụkọ
Idenye aha na ibe akwụkwọ akụkọ isonye na mbụ nweta ozi.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Intec Printing Solutions Ltd
Gịnị kpatara ị denye aha na akwụkwọ akụkọ Intec tupu iziga anyị email - wee nweta ohere…
Mbelata ego na-enweghị atụ!
[kọntaktị-ụdị-7 id = "320" aha = "Ndị ahịa kọntaktị"]